काठमाडौँ । राजकिय शैलीमा जन्मदिन मनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना भएको छ । आइतबार ६९ औं जन्मदिन मनाउन तेह्रथुमको आठराई पुगेका ओलीको जन्मदिनको अवसरमा तयार भएको केकमा नेपालको नक्सा प्रयोग भएको भन्दै समाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको हो ।
एउटोले भन्थ्यो रे - राजा हुन पाए पेटभरी खुदो खान्थेँ । ओलीसरले जन्मदिनको अवसरमा पेटभरी खुदो खानुभएछ । यो एक भद्दा राजकीय तिर्खा हो । मेट्न दिम ।
— Rabi Mishra (@rabimishra) February 24, 2020
त्यसोत, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको आचारसंहितालाई उल्लंघन गर्दै तडकभडकका साथ केक काटेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना शुरु भएको छ । नेतृत्वमा रहेका ओली आफैले यस्तो काम गर्नु राम्रो नभएको कार्यकर्ताहरुको स्वर छ । गत माघ ५ गते कार्यकर्ताहरुमा एउटा सर्कुलर पठाई जन्म दिन, ब्रतबन्ध पास्नीजस्ता परम्परागत संस्कारहरुलाई घर परिवारमै सीमित राख्नुपर्ने उल्लेख भए पनि ओली भने चार वटा लिएर आठराई पुगेका थिए ।
... & how frustrating that PM KP Oli fails to understand the devastating optics of his grand personal birthday bash in Aathrai, commandeering army helicopters, scores of vehicles bringing fawning officials & fawning politicians, &acake delivered by via Yeti Holdings helicopter.
— Kanak Mani Dixit (@KanakManiDixit) February 24, 2020
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनमा यती होल्डिङ्सले उक्त केक पुर्याएको हो । एउटा हेलिकप्टर नै प्रयोग गरेर उक्त १५ किलोको केक आठराई पुर्याइएको हो । नेपालको नक्साक अंकित उक्त केक काट्दा ओली निकै खुशी थिए । ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसन बार्गेनिङ गरेर आलोचना खेपीरहेका ओली पुनः अर्को विवादमा परेका छन् । सोही कारण सामाजिक संजालमा उनको शैलीको चर्को आलोचना भएको छ ।
केक र जन्मदिन तपाईको व्यक्तिगत कुरा हो तर नेपालको नक्सा Birthday मा काटिने चित्र भने पक्कै होइन PM Oli ? अब बुझ्नुहोस् तपाईं के को लायक हो? pic.twitter.com/L2VQXVFyDD
— Bakhat Khadka (@BakhatKhadka) February 23, 2020